Google Adsense ee Quudinta | Martech Zone
Sabti, Agoosto 4, 2007 Axad, Agoosto 19, 2007 Douglas Karr
Marka quudintu furto oo ay sameyso codsi muuqaal ah, Google wuxuu si isdaba joog ah u bixinayaa sawirka duulimaadka. Tan waa in loo sameeyaa sidan si loo xakameeyo miisaaniyadda Xayeysiiyaha. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan haysto miisaaniyad dhan $ 100 - markaan isticmaalo miisaaniyaddaas, qayb kale oo xayeysiis ah waa in loo sameeyaa qofka xiga ee furaya quudinta.
Mid ka mid ah sheyga xiisaha lihi waa xulashada Blogger ama Nooca Dhaqdhaqaaqa. Maxay caqabado ugu yihiin madal gaar ah? Ma jiraan caqabado? Waxay umuuqataa tikniyoolajiyaddan inay kusii fidi karto goob kasta oo awood u leh RSS. Sida Google, ma jiraan wax badan macluumaadka laga heli karo boggooda.
Waxaan rajeynayaa inaan isku qoro Adsense for Feeds markii la helo. Haddii aad hayso macluumaad dheeri ah - fadlan ku soo celi faallo-celinta faallooyinka.
Sideed shay oo aadan aniga iga aqoon